Somalidu waxa ey tiraa: (Shimbirka Shaaweel Garabeey agteenana waa joogaa). - Damqo
Somalidu waxa ey tiraa: (Shimbirka Shaaweel Garabeey agteenana waa joogaa).
(DMN) : Talyaniga – Somalidu waxa ey tiraa: (Shimbirka Shaaweel Garabeey agteenana waa joogaa).
Dhibaatada ah yaa qaatay Lacagtii Ummadda ee tiil Bangiga Dhexe( Bank Al Markazi), kaligeena ma ahan.
Masuuliyiinta wadamada Afrika iyo Carabtuba ha u badnaadeen, waa Su’aal taagan…..Masuuliyiinta laftooda ayaaba weeydiinayo: shacaboow, yaa qaatay Lacagtii Ummadda ee tiil Bangiga Dhexe?.
Ugu dambeeyna Masuuliyiinta ayaa shacabka Ku qancinaya in la ogaaday cidda xaday.
Waa Caaracaaro Mucaarad
ah oo u shaqeyso quwado shisheeye, sida lagu ogaaday baaritaan lagu sameeyay khasnadda Dhexe ee Bangiga.
Jeebka madaxdana.!!!!!!, Yac wax sheeg sheega dhaaf.
Arragtidaada Xur ayaad u tahay, wixii khaldan Ka Sax, Hana shakhsiyeeyn.
Previous Faah faahin:-Toogasho ka dhacday Xaafad ka tirsan Muqdisho
Next Dawo – Dowlada dhexe ay bixiso lacago aad u farabadan kuwaasi oo lasiiyo dad facebook-ga ku amaana Dowlada ka sheego